China Protale heat heat machine ifektri abakhiqizi | Taile
1. (Umshini omkhulu wokushisa we-Digital Heat Press) Usayizi wepuleti wokushisa ungu-12 "× 10", usayizi omkhulu ukuvumela ukuthi wenze amahembe kuwo wonke amalungu omndeni wakho. It impela i-DIY, idlulisela amagama kukotini, i-fiber, insimbi nokunye ku-, ifanele ukukhiqiza isipho.
2. [Ngesandla samahhala] Umshini wokushisa omncane ungakhulula izandla zakho. Ngemuva kokusetha isikhathi esifanele nokushisa, ungakushiya wedwa bese wenza ezinye izinto ngenkathi kusebenza.
3. [Umsebenzi Ombaxambili - Ukudluliswa noku-ayina] Umshini wokucindezela ukushisa ungasetshenziselwa umshini womshini wokushisa wokushisa nomshini woku-ayina. Ukusetshenziswa okubili kungumnotho. ungabe usathenga umshini woku-ayina ohlukile.
4. (Safe Anti-Overheating System) Izendlalelo ezintathu zokwakha okungamelana nokushisa zivikela isitokisi sangaphandle ekushiseni. Izinto zokushisa zifaka umsebenzi we-shutoff wokushisa ngokweqile, okugcina iphrojekthi yakho ingabambi umlilo lapho icindezelwe isikhathi eside kunokulindelekile.
5. (Cindezela Ubuchwepheshe) Patent Ubuningi obuphezulu bokucindezela ubuchwepheshe, asikho isidingo sokucindezela ngesandla
6. (UKUSETSHENZISWA KOKUSEBENZISA UMSEBENZI) - Umklamo wesibambo ongasebenziseki osebenziseka kalula wenza yonke inqubo yokuphrinta ibe lula futhi iphephe. Izibambo ezikhululekile zithuthukisa ukusebenza kahle.
7. (ISIKHUNGO SOKUPHEPHA ESINGATHOLAKALA) - Isizinda esiphephile esingaphepheka senzelwe ukubekwa nokuthathwa okuphephile; Isibambi esisheshayo sokusebenza okulula.
8. (Ifanele i-Sublimation Paper ne-Thermal Transfer Sticker) Umshini wokucindezela omncane we-Mini heat ungagcini ngokudlulisela isitikha sokudlulisa esishisayo, futhi ungaphrinta iphepha le-sublimation. I-Temp Rang: 0-392 ° F (0-200 ℃); Isikhathi: 0 ~ 999s. Kungcono kuwe ukusetha ama-60s w / 356 ° F lapho usebenzisa iphepha le-sublimation ukuphrinta, bese usetha ama-10s w / 320 ° F lapho usebenzisa isitikha sokudlulisa okushisayo.QAPHELA: I-Heat Press ilungele i-VINYL MATERIAL.
INKONZO YANGAPHAMBILI KOKUDAYISWA: Isiqinisekiso sokwaneliseka Uma unanoma yisiphi isizathu unganelisekile, sicela usazise futhi inkonzo yethu yamakhasimende izokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza.
(Iphakheji ifaka phakathi) umshini Wokucindezela Ukushisa × 1, Isivikelo Sokushisa Esingashisi, 2 Isisekelo Sezokuphepha × 1, T shirt × 1, Manual × 1, screwdriver x 1 ， Izikulufu x1pack.
1.Ivoltage: 110V / 220V
Amandla 2: 1000
3.Temperature Ibanga: 0 ~ 430
Ibanga Lesikhathi: 0 ~ 999sec
Ukupakisha Usayizi: 37 * 32 * 22cm
Langaphambilini ipeni ukushisa cindezela umshini
Olandelayo: Umshini wokucindezela ukushisa wehembe
Umshini Wokucindezela Okushisa Okubili
Ukushisa Cindezela Umshini Ephathekayo
Manual Heat Cindezela